Faritra Boeny: misy fanantenana ny fivelaran’ny tany ho rakotra Ala | Région Boeny
Faritra Boeny: misy fanantenana ny fivelaran’ny tany ho rakotra Ala
24 mars 2015 A La Une, Actualité
Raha ny 21 mars no Andro iraisam-pirenena ho an’ny Ala, izay nomena loha-hevitra hoe Ala, Toetr’andro, Fiovaovan’ny toetr’andro, dia ny zoma 20 febroary 2015 no nomarihina izany ho an’ny teto Boeny.
Fikojakojana, fihavana sy fanadiovana ny manodidina ireo zanakazo isam-potony, miisa 17 000 izay novolena tamin’ny taom-panokafana ny fambolen-kazon’ny Faritra ny 04 febroary lasa teo, no nanamarihan’ny Foibem-paritry ny Tontolo iainana, ny Ekolojia, ny Ranomasina ary ny Ala (DREEMF) eto Boeny, io Andro iraisam-pirenena ho an’ny Ala io, taty Mahajanga.
Tsiahivina fa teny Marohogo, kaomina Ambalakida, distrikan’i Mahajanga II, izay Toby fiarovana ny Ala (Station forestière) eto Boeny no nambolena ireo zana-kazo miisa 17 000 ireo ka nanaovana izao hetsika fanaraha-maso sy fanadiaovana izao. Tsikaritra ary tamin’ity fotoana ity fa velona 100% avokoa ireo zana-kazo ireo.
Ravo nanoloana izany fahombiazam-pahavelomana izany ny Talen’ny DREEMF Boeny, Rtoa Rakotoarimanana Marcelle Josette Evelyne ka nanambara fa manana andraikitra lehibe amin’ny fisorohana ny vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro ny Faritra Boeny. Ka paik’ady enti-miatrika izany hoy izy dia tsy hijanona eto ny fikojakojana ny zana-kazo novolena izay hanjary ho Ala any aoriana, fa ho mandavan-taona. Tanjona ny hampitombo 10% isan-taona ny velaran-tany voarakotra ala ary tsy ny an-tanety ihany fa hatreny amoron-drano, amin’ny alàlan’ny ala honko.
Fikambanana maromaro mpisehatra sy mpitrandraka ala aty amin’ny Faritra, ireo mpanao tantsoroka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, toy ny fandaharanasa alemaina PAGE-GIZ (programme d’appui à la gestion de l’environnement) no niara-nisalahy tamin’ireo mpiasan’ny DREEMF Boeny, nanatanteraka izao hetsika fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Ala taty Mahajanga izao.
Nanentana ny rehetra Rtoa talem-paritra hiverina ao Marohogo amin’ny volana jona ho avy izao, fa mbola hisy fanindroany ny hetsika fanadiovana toy izao. Ary efa natsidiny sahady fa ho tohizana amin’ny alàlan’ny fankalazana ny Andro maneran-tany ho an’ny ny Tontolo iainana ny 05 jona 2015 izany ka any amin’ny kaomina Mariarano, distrikan’i Mahajanga II indray no hanamarihana io andro io amin’ny alàlan’ny fambolena honko sy fanadiovana faobe ary fampiratina ny vokatry ny Ala.